बदनाम पप्पुलाई ११ अर्बको काम, ठेक्का लिन्छ तर अलपत्र पार्छ ! - Everest Dainik - News from Nepal
बदनाम पप्पुलाई ११ अर्बको काम, ठेक्का लिन्छ तर अलपत्र पार्छ !
काठमाडौं, असोज १० । पप्पु कन्स्ट्रक्सन बदनाम छ। देशभरि झन्डै तीन दर्जन पुल जिम्मा लिएको छ। काम भने धेरैतिर अलपत्र पारेको छ। अहिलेसम्म उसले ११ अर्ब रूपैयाँ बराबरका ४० आयोजना ओगटेको छ।
याे पनि पढ्नुस पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई फेरि नयाँ सरकारी ठेक्का
याे पनि पढ्नुस पप्पु कन्स्ट्रक्सन : ठेक्का पाइरहने, काम नगर्ने
स्थानीय सडकतर्फ २६ वटा पुलको जिम्मा पप्पुले लिएको छ। यसमध्ये १८ वटाको निर्माण अवधि सकिएको छ। तर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन। अन्य आठको निर्माण कार्य समेत सुरु भएको छैन। अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
ट्याग्स: Pappu, पप्पु कन्स्ट्रक्सन